Tag: how many mobile users | Martech Zone
Maka: bangaki abasebenzisi beselula
Lezi Izibalo Kufanele Zithinte Umbono Wakho Wokumakethwa Kwamaselula
NgeSonto, Novemba 8, 2015 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Ngabe usulande inguqulo yakamuva yohlelo lwethu lweselula - i-iOS, i-Android? Sisasebenza ukwenza ngezifiso okuqukethwe kepha uhlaka lukhona, futhi akuthathanga neze imizamo yokukususa phansi ngenxa yesikhulumi esimangalisayo sohlelo lokusebenza lweselula esivela eBluebridge! Sijabule kakhulu ngamathuba! Sesinama-podcast ethu wokumaketha kanye nochungechunge lwethu lwe-MarketingClips olugcwalisa uhlelo lokusebenza, futhi! Siphinde sishicilele imicimbi futhi singathumela